Linus Torvalds: Linux 3.20 ama 4.0? | Laga soo bilaabo Linux
40 daqiiqo ama wax ka hor Linus ayaa tan ku qoray boggiisa google plus
Waxaan in muddo ah ku hadaaqayey MA RABO mid kale (linux) 2.6.39 halkaasoo tirooyinku ku filan yihiin oo aadan kala saari karin.
Waxaan si tartiib tartiib ah ugu soo dhowaaneynaa taas, iyadoo ay soo socoto version 3.20, waxaana mar kale iga sii yaraanaya faraha iyo suulasha.
Waxaan in muddo ahba ku hadaaqayey u dhaqaaqista nooca 4.0. Laakiin aan aragno waxa dadku u maleynayaan.
Marka - ma waxaan sii wadaynaa 3.20 maxaa yeelay tirooyinka waaweyni waa galmo, mise waxaan u dhaqaaqeynaa 4.0 oo waxaan dib ugu dejineynaa tirooyinka wax yar?
PS: Si loo cadeeyo: "noocyada waawayn" waxaa loola jeedaa 20 ee 3.20, maahan 4 ee 4.0. Sida haddii ikhtiyaarka kale uusan caddeyn. Laakiin sahankani wuxuu ku saabsan yahay dadka si fudud u jahwareersan.
Waxay horeyba u leedahay qiyaastii 600 oo cod 40 daqiiqo. Maxay leeyihiin?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Linus Torvalds: Linux 3.20 ama 4.0?
Aniga ahaan boodboodiyinku waxay ahaayeen 9 kadib, maxaa yeelay inbadan oo naga mid ah ayaa isku buuqnay, gaar ahaan cirridka iyo nacaladda xun dam
Isla ninka fudud ee la weyddiisto oo aan la saarin
Aniga ahaan taas waa inaan ka jawaabaa haddii uu jiro isbedel aad muhiim ugu ah Kernel, hormar la taaban karo ama nooc aad u xiiso badan oo faa'iido u leh qof walba.
Waxaan u maleynayaa in horumarka aan u lahayn dib-u-soo-kabashada markii kor loo qaadayo kernel ay muhiim u tahay in loo guuro 4.0. Isticmaalaha caadiga ah saameyn badan kuma yeelan, laakiin ka fikir server-yada ...
Hore u socod 4.0
Waxaan u maleynayaa in dhabar jabinta tooska ahi ay cudurdaar u noqon karto boodboodka tirada.
Waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii Linux 4
Waxaan kaqaybqaatay sahanka waxaanan u janjeerayaa nooca 4.x maadaama runtii ay jiraan isbadalo badan oo kudhaca kernel ilaa iyo bilawgii taxanaha 3.x. Intaa waxaa dheer, 3.20 ama 4.0 kernel ayaa keeni doona wax cusub ... Cusbooneysiin kulul oo aan dib u soo kicin taasna waxay u qalantaa nooc cusub oo kernel ah: D.
Josep M. Fernandez dijo
Waxaan doortay doorashada koowaad. Dameer weyn ayaa socda ama maya.
Jawaab Josep M. Fernández
Sidoo kale waan kaqeybqaatay oo sida petercheco waxaan u maleynayaa inay jiraan isbadalo badan oo lagu sii wado tixgalinta nooc yar, waxaa la joogaa waqtigii lambarradu ay isku beddeli lahaayeen 4.x oo markii horumar lagu daro, u bood nooca 5 (markii ay hore u jireen ama aad u badnaayeen calaamadeeyay) iyo haddii aan laga kordhin 0.1 ilaa 0.1 (laga bilaabo nooca 4.1 ilaa 4.2 iwm)
Ku jawaab sander
4.0 waxay umuuqataa inay kafiican tahay 3.20 laakiin lasocodka qaabka micnaha sax ma ahan, laakiin hadaan raacno waxaan kusoo afmeeri doonnaa kernel 2
Ku jawaab Ciise Perales
Hubso, horey usoco 4.0
Ku jawaab napsix
Waxyaabaha macquulka ahi waxay noqon doonaan in loo xisaabiyo 10, taas oo ah in la yiraahdo 3.1, 3.2 ... 3.10, intaas ka dibna loo aado 4.0, raac isla nidaamkaas illaa 10 iyo wixii la mid ah. Runtii qaadashada illaa 20 ama codad ka sareeya nooc waalli ah.
Si kale haddii loo dhigo, waa lagama maarmaan (in aanan dhammaysan fikraddii hore) in loo gudbo 4.0 hadda. Koontadu inbadan ma joojiso.
Ugu horreyn - Tarjumaad waa, ugu yaraan marka la yiraahdo, waa tarjumaan otomaatig ah.
Marka labaad - Waa inaad sharraxdaa noocyada kernel-ka Linux iyo noocyadiisa aan caadiga ahayn.
Marka laga reebo inaad u ekaato kaftan, waxaad isticmaali kartaa midabka 'Hurd kernel' ama 'BSD'.
Jimco Wanaagsan 13. Waxaan u maleynayaa inay taasi u gaar tahay Mareykanka, Hisbaanikana waa Talaado. Gumeysi wanaagsan.
Waxaan sidoo kale ku darsaday jirkayga. Waxay ahayd inuusan qoslin.
Ma aqaano ingiriis badan, laakiin turjumaadaas waxay iga dhigeysaa mid xishood badan. Dhamaan smartass-kii kajawaabay, waad arki kartaa inay ama ku qadarinayaan ama wax kugu leeyihiin. Hagaaji Ingiriisigaaga.
Waxaan u janjeeraa dhanka 4.0. Dhowr ayaa yidhi, iyada oo arjiga aan lahayn dib u bilaabid hore ayaa horeba wanaagsan oo muhiim ah in la beddelo nooca, oo ay weheliso astaamo kale oo aan horay ugu aragnay noocyadii hore.
Wax tarjumadu macno malahan, waa la fahmay. Faallooyin badan oo sidaas loo leeyahay, waa wax badan ...
Ku jawaab Gabrielus
Ka dib jawaabo badan oo daandaansi ah oo aan ku siiyay, ama ku dhowaad troll, sidaad u aragto Linus. Isla sidaas ayaan sameeyaa, laakiin edeb badan ayaan leeyahay.
Dhamaan smartass? Ah Nah, waan maqanahay… LOL!
4.0.0 way fiicnaan laheyd
Mid kale oo ku tiirsan nooca 4
Waan ka xumahay inaan ahay duqsi fucking, sidoo kale waan jeclahay. Noocyada xasilloon waa lammaanaha. Ka bood 3.waxaa u jira 4. wax. Waxay u egtahay Python, waxay isku dayeysay inay hesho nooca 3 kun sano.
Francisco Molina Jimenez dijo
Waxaan toos ugu aadi lahaa kernel 4.0
Jawaab Francisco Molina Jimenez
Jadwal ugu samee jawaab toos ah fariimaha soo socda ee ku jira Gmail